Ireo esoeso 6 tsara indrindra ho an'ny tetik'asa famolavolana | Famoronana an-tserasera
Encarni Arcoya | 19/07/2021 19:00 | Inspiration
Source Mockup: Pinterest
Te-hampideradera afisy, afisy, sora-baventy ve ianao, na amin'ny ankapobeny, tetikasa fanoharana izay nataonao? Tena tsara ny manolotra azy amin'ny mpanjifa ao anaty antontan-taratasy izay ahitan'izy ireo ny endriny, fa ahoana kosa raha mampiasa a ianao fanesoana mba hanomezana azy tena maha-zava-misy bebe kokoa ary hahatonga azy ho hafa tanteraka?
Raha mbola tsy nieritreritra ny hampiseho ny volanao amin'ny fomba hafa ianao taloha, amin'ny alàlan'ny fanesoana ary ankehitriny liana ianao dia hiresaka momba izany izahay. Izy io dia azo ampiasaina hampianarana ny endriny amin'ny fomba tany am-boalohany ho an'ny mpanjifa, fa koa hanehoana azy ireo amin'ny pejin-tranonkala, tambajotra sosialy, sns. ary misy fiatraikany lehibe kokoa.
2 Maninona no mampiasa mockups frame
3 Modely azo sintomina amin'ny endriny
3.1 Olona mitazona afisy
3.2 Fanesoana rindrina sary
3.3 Fanesoana boaty tsotra
3.4 Fanesoana ny afisy
3.5 Afisy efajoro
3.6 Fampirantiana zavakanto miaraka amin'ireo volavolanao
Loharano: maimaim-poana mockup
ankapobeny, ny mockup dia photomontage. Izy io dia ampiasaina mba hanomezana topy maso ny famolavolana iray mba hahitana ny endrik'izany amin'ny endrika samihafa. Alao sary an-tsaina, ohatra, hoe nangatahina ianao hamolavola sika. Ny zavatra mahazatra indrindra dia ny fanaovanao tetik'asa ahazoanao ny sary ho an'ny mug, fa ahoana ny fahitan'ny client azy?
Tsy mila manonta sombin-tsapana intsony ianao hahitanao ny endriny; Azonao atao ny mampiasa modely mug mockup hananganana fivoriambe virtoaly miaraka aminy ary, noho izany, omeo endrika sy endrika izy, na dia an-tserasera aza izany ary tsy azo tsapain-tanana amin'ny valiny farany. Ary raha tianao izany, rehefa vita ny kaopy dia ho tiany bebe kokoa.
Maninona no mampiasa mockups frame
Ankehitriny rehefa fantatrao ny atao hoe mockup dia tonga ny fotoana hianarana bebe kokoa momba ny antony tokony hampiasanao azy. Adinontsika matetika ny manome ny «réalisme» ny volavolantsika. Ohatra, andao haka ny tranga afisy. Efa vitanao izany ary asehonao arakaraka ny fanoloranao rakotra, sora-baventy sns. Izany hoe, miaraka amin'ny fisie jpg izay ny fonony rehetra. Saingy ny mpanjifa, na ilay olona mahita azy, dia tsy maintsy mamantatra ny mety ho endriny amin'ny tena fiainana, izany hoe amin'ny sary hosodoko, eo amin'ny fonony, amin'ny tranokala ...
Ny fanesoana iray dia mamela ny olona tsy hieritreritra an'izany, satria ny zavatra ataony dia raiso ilay asa vitanao ary ataovy ao anaty môdely mba hisolo tena ny toerana misy azy (sy ny endriny) Misy ny tsotra, izay misy volavola miloko ianao ary apetraka eo alohany ny sary, omena azy io ho toy ny sary tena izy, na misy sary be pitsiny kokoa, izay toa sary iray avy tena fiainana izay ahafahana mamorona hevitra tsara kokoa raha endrika tsara izy io.
Ary maninona no maneso? Izany indrindra no antony, satria manampy an'io olona io hahalala ny endrik'izany ianao. Indraindray, mahita azy io amin'ny finday na amin'ny solosaina, tsy fantatsika hoe hanao ahoana ny valiny farany. Saingy amin'ity loharano ity ianao dia hanampy amin'ny fanekena azy tsara kokoa (na hahita ireo lesoka mety ananan'ny asanao sy manitsy azy ireo alohan'ny handefasana azy amin'ny mpanjifa).
Mazava ho azy fa fomba iray hisintomana ny sain'ny olona ihany koa izy io, mety indrindra amin'ny pejin-tranonkala na tambajotra sosialy satria, raha tokony aseho amin'ny fomba "mahazatra" ny volanao, dia milalao kely amin'ny seho isan'andro ianao, na miaraka amina endrika izay ahitanao azy ilay tetikasa izay notanterahinao. Efa ao anaty vakizoro ianao, na miaraka amina antontan-taratasy hafa, dia azonao atao ny mampiditra sary izay tsy mampiseho afa-tsy ny endrika, fa ny sary manakana azy ireo mety ho fanesoana.
Raha misy ny mockups amin'ny frame, ireo dia mety tsara amin'ny fonon'ny boky (raha mbola tsy ao an-tsainao ny hoavin'ilay boky), ho an'ny afisy, sora-baventy, sns. izany dia mitaky ny fakana sary an-tsaina ny fomba hanehoana azy ireo.
Modely azo sintomina amin'ny endriny
Loharano: Mockup Free
Efa nanaikitra ny bibikely ve izahay ary tianao izany andramo ny fampiasana azy ireo amin'ny tetikasanao? Fantatrao fa amin'ny Internet dia misy maodely maimaim-poana sy be karama azonao ampiasaina. Na afaka mandany kely amin'ny fotoanao ianao amin'ny famoronana anao manokana. Izany dia hanome ny endrika anao bebe kokoa, indrindra satria tsy hisy hampiseho ny fomba fanaovanao azy.
Fa raha tsy te handany fotoana ianao ary mila zavatra malaky dia ity misy maodely vitsivitsy izay hahitanao ireo mockup frame sy safidy hafa.
Olona mitazona afisy
Ity fanesoana ity dia manome ny fikasan'ny olombelona bebe kokoa ny volavolanao satria hisy izany toy ny nanonta ny asanao ianao ary nalaina sary miaraka amina olona mitazona azy amin'ny tanany. Azonao ilay izy misy amin'ny PSD ary misy karazany miova sivy izy io, amin'izay azonao ampiasaina ilay tianao indrindra na tianao indrindra.
Fanesoana rindrina sary
iray hafa safidy, izay koa no tena tonga ao an-tsaina indrindra rehefa mieritreritra sary hoso-doko isika, dia ny manolotra topi-maso ny asanao toy ny sary hosodoko mihantona amin'ny rindrina. Azonao atao ny manolotra fampisehoana manokana sy sary an'ny inona no ho endrik'ilay volanao "amin'ny tena fiainana", na dia saika.
Fanesoana boaty tsotra
Amin'ity tranga ity, ary maimaim-poana, manana ianao ity modely ity. Mampiseho a rindrina malama sy sary roa mihantona, toy ny sary, izay ahafahanao mametraka ny volanao. Ankehitriny, na dia toa tena "fototra" aza izany, raha jerenao dia misy aloka manome ny zava-misy an'io sehatra io, ary avy eo manome endrika kanto kokoa.
Fanesoana ny afisy
Moa ve ny tetik'asa asehonao amin'ny arabe? Asehoy izany eny amin'ny arabe. eto azonao atao ny misafidy ny fomba fijeriny amin'ny sehatra iray, mihantona eo amin'ny rindrin'ny trano, ohatra.
Saingy azonao atao ihany koa ny mieritreritra ny hanao izany amin'ny toeram-pialofana bus, izay ahitantsika izao dokam-barotra na amin'ny karazana marquee.
Safidy iray hafa ny fampiasana mockup poster, izay iaraha-miasa a modely photorealistic. Amin'ity tranga ity, ity izay atolotray anao dia manana haben'ny endriny samihafa ary koa zoro isan-karazany. Mba hampisehoana ny volavolanao amin'ny fomba voalohany, toy ny hoe nanao photoshoot ho azy ianao.
Azonao ilay izy eto.
Fampirantiana zavakanto miaraka amin'ireo volavolanao
Ary ahoana raha ataonao toa tena nanana izany ianao fampiratiana zavakanto avy taiza ny volanao? Eny, izany no atolotray anao amin'ity modely ity. Fomba iray hisarihana ny saina bebe kokoa, indrindra rehefa mahita sary tena misy ka mahatonga anao hisalasala.
Afaka mahazo izany ianao eto o eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ireo esoeso miisa 6 tsara indrindra